"Coldoon xadhigiisii" Miyey Somaliland isku xishootay? Mise way kala xishootay? - somalilandlivemedia
23:53 30. May 2017
Coldoon xadhigiisii” Miyey Somaliland isku xishootay
Warsan iyo weedhsan iyo saadaal irmaan akhyaareey idil ahaantiinba, waxaynu qormadan kooban isku dul istaagidoonaa hadii eebe idmo waxa aynu ka fahmi karno xidhitaankii Samafale Coldoon iyo sii dayntiisanba.
Xidhitaankii Coldoon iyo xukunkiisiiba.
Samalahan Coldoon oo badiba bulshada Soomaalida caan kaga noqday adeega uu u fidiyo dadka baahan ayaa dhawaan u kicitimay Caasimada Soomaaliya halkaas oo uu sawir la soo galay madaxweynaha hada ee Soomaaliya mudane Farmaajo doorashadiisii ka dib .
Waxa uu Samafale Coldoon sidoo kale ku caan yahay isku soo dhawaynta umada Soomaaliyeed marka laga yimaado siyaasada, wuxuu sidoo kale badi farta ku fiiqaa arin aan laga hadal oo ah xidhiidhka Itoobiya iyo Somaliland, isagoo sidoo kale ka diga dheelitir la´aanta xidhiidhka labada wadan waa Somaliland iyo Itoobiya sidoo kalena tilmaama in la kala saaro Soomaaliya iyo Soomaali ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaan.
Dhamaan arimaha aynu soo sheegnay oo ah kuwo ka hor imanaya siyaasadaha Somaliland sidoo kalena aanay Somaliland jeclaysan in siduu uga hadlo waxay sababtay inuu noqdo bartilmaameed ay badhtilmaansadaan kuwo ka mida madaxda Somaliland kaas oo ugu danbayntii lagu xidhay Hargeisa laguna xukumay 2 Sano oo xadhiga iyadoo loo adeegsaday Sifo qaanuuniya.
Hase ahaatee waxay ahayd maxkamad aad la isku waydiiyey daacadnimadeeda sidoo kale waxay ahayd mid khilaaf badan dadka ka dhex dhalisay, waxaa intaas sii dheer iyadoo isla kuwii xukunka riday ay ku kala duwanaayeen siday uga kala hadleen xukunkaas isaga ah . Si kastaba ha ahaatee waxay ahayd maxkamad aan cadaalad ku dhisnayd oo ku salaynayd ujeedooyin dahsoon oo dadna lagu raali galinaayey dadna lagu dhafoor taabanayey halka dad kalena fariin loo diraayey,sidoo kale waxaynu maqaal hore isku waydiinay suaasha ah : Xadhiga coldoon yaa lagu raaligalinayaa? Yaase lagu dhafoor taabanayaa ? )
Cafinta Siilaanyo iyo Garsoorka.
Sida la inoo sheegay ee warbaahintana la soo dhigay waxaa jiray goaan ka soo baxay madaxdweyne Siilaanyo oo ahaa inuu madaxweynuhu cafis u bixiyey Coldoon, hadaba meesha salaadu ka xidhmi la´dahay waxay tahay oo miyaanu Coldoon qaanuunku xidhin gaar ahaan xukun ka soo baxay haayada garsoorka dalka ugu saraysa ? Sidaynu se u fahanaa kala kala madaxbanaanida ay sheegaan ee haayadaha dawlada ee Fulinta, Sharcidajinta, iyo Garsoorka?
Wadamada Dimuquraadiyada ku abtirsada ee Reergalbeed marnaba ma arkaysid iyadoo la leeyahay fadliga Obama ama fadliga marwo Merkel ee Germany aayaa lagu sii daayey eedaysane xukun lagu riday oo xidhnaa. Balse arinkani wuxuunbuu ka dhacaa dunida hadhay in madaxweyne soo faro galiyo xukun lagu riday eedaysane.
Ma nihin kuwo ka soo horjeeda sii daynta Coldoon se waxaan sheegaynaa uun god daloolooyinka nidaamka dalkeena ka jira, coldoon markii horeba baadiil iyo eex qaanuunka laga galay ayuu u xidhnaa ducadii dadkii samaakiinta ahaydna ilaahay waakaa aqbalay, se waxay dhibtu tahay Siilaanyo iyo qaanuunku waa inay kala baxaan hadii Coldoon qaanuunku xidhay waxay ahayd inuu qaanuunka laftiisu sii daayo oo isaga isa saxo se may ahayn inuu Siilaanyo sii daayo sidaasaa Somaliland uga sharafbadnaan lahayd sida hada la sheegay.
Wadada loo maray sii daynta Coldoon iyo waxaynu ka fahmi karno.
Arintan ah in dad bulshada ka midi u tageen madaxweynaha kalana hadleen arinka Coldoon waxanu ka eegi karnaa dhinacyo badan oo ah dhanka koowaad oo aynu ka fahmi karno in la ilbaxaayo oo waagii hore cida wax ka tabanaysa qaanuunka budhkay la boodi jirnay se hada waxaynu wax yar hore ugu riqaansanay toobiyaha qaab xirfadaysan inaynu wax isku waydiisan karno inagoo isku iljabinayna halkii waagii hore budhka aynu isku qaadan jirnay tanina waa u tusaale aragtidayda waxayna ila tahay inuu wasiir Geeljire markhaati inooga noqon doono.Arintani maaha arin cusub ee waa arin badi dunida ka wada jira waana waxay ugu yeedhaan afka maldahan (Vitamin B )
Waxa Geeljire Coldoon uga dhigan yahay.
Marka laga hadlaayo arimaha sida dadka saamaynta leh loo weeraro ama arimo looga dhamaysto waxaa jira waxay ugu yeedhaan (Billard Strategy) oo ah sida ka muuqata magaca oo la xidhiidha ciyaarta miiska lagu ciyaaro ee kubadaha la isku beeg beego iyadoo kubada la rabo kubad kale lagu dhufto sidaas darteed wuxuu Geeljire Coldoon uga dhigan yahay kubadaa la rabo inay kubada kale godka ciyaarta ku rido se suaashu waxay tahay imisa kubadood oo kale ayaa loo adeegsaday Geeljire ma tiiwaad buu ahaa mise tii ugu danbaysay ee dhalisay waxay aniga ila tahay in isaga laftiisa kubado kale markii hore lagu sii garaacay oo uu isagu yahay tii ugu danbaysay ee kubada godka ku riday.
Waxa Coldoon isagu uga dhigan yahay Geeljire.
Ugu danbayntii hadaynu eegno waxa arinkan Coldoon uga dhigan yahay Geejire waxay noqon kartaa sida tan: Geeljire wuxuu ka mid yahay xubnaha tirada yar ee xisbiga Kulmiye ee ka soo jeeda beesha Coldoon ee HY halka beeshaasi badi taageerto wiilkooda qunyarsocodka ah ee Ciro xisbiga uu hogaamiyo ee Wadani oo musdanbeedkiisaba uu ka mid yahay wiilka gacanta fudud ee xildhibaan Awxoog oo ay si gaara isusii xigaan Mr Geeljire.
Walow aanu hada haynin xilwasiirnimo ogaalkaygii waxaa uu arinkani uga dhigan yahay in loo fahmo wiil danta reerka meesha u fadhiya sidoo kalena saamayn ku leh xisbigaa uu ka tirsan yahay iyo dawlada hada talada haysaba taas oo usoo jiidaysa in gadaal loo istaago beri hadii la xisaabtomana oo la yidhaa maxaad na tartayna inuu liiska ku jiro miyaanan hebel idii soo dayn waa hadii malaheenu sax yahay.
Dhanka kale waxay arintani gebi ahaanba kor u qaadaysaa magaca uu bulshada Soomaaliyeed oo dhan ku yeelan karo mudane Geeljire waayo Coldoon waa shakhsiyad aad looga taageero bulshada Soomaaliyeed oo dhan ninkii ninkaa ku kaalmeeya sii dayntiisana wuxuu ka mudnaan doonaa agteena sharaf marka laga yimaado ujeedooyinkaa dahsoon wuxuu Geeljire Kulmise u qaabilsan yahay arimaha nabadaynta isku soo dhawaynta bulshada hore waa shakhsigii loo xilsaaray qaramayntii Profesor Samater, maantana wuxuu kaalin laxaad leh ka qaatay sii dayntii Coldoon kolkaa suaashu waxay tahay miyuu Geeljire ugu jiraa Siilaanyo halkuu Warancade ugu jiray Cigaal iyagoo labaduba ka soo wada jeeda isku reer mise Somaliland oo dhan ayuu u qaabilsan yahay xilka qaramada midoobay ku magacawdo (A goodwill Ambassador).
Guntii iyo gebogebada maqaalkan waxanu xidhitaankii Coldoon ka fahanay inaanu qaanuunka Somaliland xishoon halka aynu sii dayntiisiina ka fahanay in inta Somaliland qaanuunkeeda ka xishooto ay ka badan tahay inta ay Somaliland qabiilkeeda ka xishooto. Waxaa kale oo aynu ka fahnay cafintiisii madaxwenaha inaanay weli jirin madaxbanaani taama oo u dhaxaysa haayadaha dalwada .Waxaynu kaloo ka fahanay in laga horumaray dhankii budhka iyo caadifada oo hore loogu riqaansaday habka dunida wax isdaba marisaa adeegsato ee ah Vitamin B iyo in cid cid loo maro waana usluub dhaama kii dhiigu ku daadan jiray .
Halkan Ka Akhriso Qormo kale oo Xadhiga Coldoon Laxidhiidha—
DAAWO HOOYO SOMALIYEED OO CUNUG AY DHASHAY KU RIDAY MUSQUL MAGALADA MUQDISHO
Wasiirkii Hore Ee Biyaha Somaliland Oo Soo Bandhigay Tageerada Xisbiaga WADDANI Ee Degmada Fiqi fuliye Video
Newer PostRepublic of Somaliland Independent Day ~
Older Post Astaanta Dawlada Somaliland Ee 2018 barnaamijka Qiimeynta iyo Martin Mohamed Video